Kumannaan qof oo ka firxaya colaadda ka aloosan xudduuda Myanmar & Shiinaha - BBC News Somali
Kumannaan qof oo ka firxaya colaadda ka aloosan xudduuda Myanmar & Shiinaha
Image caption Ugu yaraan 10,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay carareen guryahoodii gobolka Kachin sanadkan.
Ku dhawaad 4,000 (Afarkun) oo qof ayey qasab ku noqotay inay ka baxsadaan guryahooda tan iyo bishii April sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Tani waxay imaanaysaa iyadoo ay muddo soo taagnayd colaadda u dhaxeysa ururka madaxbannaanida ee Kachin ee magaciisa loos oo gaabiyo (KIO) iyo ciidamadda dawladda taasi oo haatan soo xoogaystey.
Waxaa sidoo kale jira kumaan kun oo qof oo barakacay iyadoo ay jirto cabsi ah in dad badan ay ku xanniban yihiin deegaanadda ay xiisaddu ka aloosan tahay ee u dhaxeeya xudduuda dalkaasi uu la leeyahay Shiinaha. Urarrada gargaarka ayaa ka dalbanaya dawladda inay u ogaalato inay gaaraan dadkaasi.
"Walaaceena ugu weyn waa ammaanka rayidka oo ay ka mid yihiin haween uur leh, dad waayeel ah, caruur yaryar iyo dadka lixaadka la'a" sidaasi waxaa yiri Mark Cutts oo ah madaxa xafiiska isku xirka hawlaha gargaarka ee Qaramada Midoobay oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP.
"Waa inaynnu xaqiijinta in dadkaasi la ammaan galiyo" ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Waa kuma fallaagada Kachin ?
Tan oo lagu daray xiisadda Rohingya ee galbeedka Myanmar (oo sidoo kale loo yaqaan Burma),waqooyiga wadanka waxaa laga dareemayaa isku dhacyo ay ku lug leeyihiin dadka laga tirada badan yahay.
Dadka Kachin oo badankoodu yihiin Kiristhaan ayaa u dagaalamayey inay ka helaan madaxbannaani balaaran wadankaas oo ahaa dal Buddhisti ah tan iyo sanadkii 1961-kii.
Guud ahaan Gobolka Kachin iyo gobolka Shan ee dhaca waqooyiga dad lagu qiyaasay 120,000 (Boqol iyo labaatan kun) ayaa dagaaladdu barakaciyeen.
Dowladda Myanmar ayaa lixdii sano ee la soo dhaafay waxay doonaysay inay heshiis nabadeed la gasho kooxaha kacdoonka wada ee ka soo jeeda bulshada laga badan yahay, sida uu leeyahay wariyaha BBC ee Koonfurta Aasiya Jonathan Head.
Laakiin dagaaladda ay ku lugta leeyihiin kooxda aadka u hubaysan ee KIO ayaa socdey kuwaasi oo wali ah mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan xooggaaga mucaaradka.
Maxaa colaadda sare u qaaday?
Dagaaladda isdaba jooga ah ayaa socday tan iyo markii ay burburtay xabad joojintii u dhaxeysay falaagadda KIO iyo ciidamadda sanadkii 2011.
Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa carabka ku dhuftay in ciidamaddu ay kordhiyeen hawlgalkooda intii indhaha caalamku ku soo jeedeen dhibaatadda Rohingya taas oo ku dhawaad 700,000 (Todobo boqol oo kun) oo qof ay u baxsadeen wadanka Bangladesh.
Maxay jawaabta caalamiga ah?
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu dhalliilay ku guuldaraysashada soo afjaridda gaboodfallada xuuqda aadanaha ka dhanka ah iyo xannibaada hawlaha gargaarka. Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday xukuumadda inay joojiyaan beenninta wararka xadgubyada ka dhacaya Kachin.
Geesta kalena safaaradda Mareykanka ee magaalada Yangon ee Burma ayaa farta ku fiiqday inay 'aad uga walaacsantahay' dagaaladda xooggan ee ka soconaya gobolka sida lagu sheegay warsaxaafadeed Jimcihii soo baxay oo lagu yiri;
"Waxaan ugu baaqaynaa dawladda oo ay ka mid yihiin ciidamadda inay ilaaliyaan dadka shacabka ah isla markaana ay ogolaadaan gargaarka bini'aadamtinimo ee loo fidinayo dadka ay colaadu saameysay" ayaa lagu yiri.